Mootummaan Paartii Bilxiginnaa Haleellaa Diroonii fi Humna Qileensaa kutaalee Oromiyaa addaa addaa keessatti raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesee kaan ammoo madeessee jira. – Adda Bilisummaa Oromoo
Paartiin Bilxiginnaa Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti waraana babal’isuu jabeessee itti fufee jira. Yeroo ammaa kanatti kutaaleen Oromiyaa waraana irraa walaba ta’an hin jiran. Haaluma kanaan mootummaan bakkoota gaaraaagaraatti diroonii fi xayyaaraan haleellaa raawwachuudhaan namoota nagaa baay’inaan ajjeesaa jira. Humnoonni paartiin Bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasee fi deggertoonni isaanii loltoonni Ertiriyaa uummata nagaa qe’ee irraa buqqaasuu fi mana jireenyaa isaanii gubuu itti fufanii jiru. Kun ammoo haala yaaddessaa irra ga’ee jira.